प्रदेश नं. ७ मा मत परिणाम आउने क्रम जारी
धनगढी, असार १६ गते । प्रदेश नं. ७ को स्थानीय तह निर्वाचनको प्रारम्भिक परिणाम आउन सुरु भएको छ । केही केन्द्रमा बुधबार राति र अधिकांश मतदान केन्द्रमा बिहीबार बिहानदेखि मात्र मतगणना सुरु भएको थियो । सम्बन्धित जिल्लाका निर्वाचन कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार केही ठाउँको मतगणना सकिएर परिणाम सार्वजनिक भएको छ । अधिकांशको आउने क्रम जारी छ । प्रदेश नं ७ मा नौ वटा जिल्ला छन् ।
सोमध्ये दुई तराईमा र ७ वटा जिल्ला पहाडी क्षेत्रमा छन् । यहाँको कुल ८८ स्थानीय तहमा भएको निर्वाचनको प्राप्त परिणामअनुसार बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको वडा नं. ६ मा राप्रपाको प्यानल विजयी भएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । राप्रपाका वडा अध्यक्ष रामसिंह पुजारा २५६ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । निकटतम प्रतिद्वन्द्वी काँग्रेसका इन्द्र भण्डारीले १८४ मत प्राप्त गरेको निर्वाचन आयोग बैतडीले बताएको छ ।
महिला सदस्यमा सरस्वती पन्त भण्डारी, दलित महिला सदस्यमा शकुन्तला आउजी, खुला सदस्यमा गोविन्दसिंह भण्डारी र कृष्णसिंह भण्डारी विजयी बनेका छन् । सोहीअनुसार बझाङको मस्ता गाउँपालिकाको वडा नं. १ र ७ मा नेकपा (एमाले) को प्यानल विजयी भएको निर्वाचन आयोगले जानकारी गराएको छ । त्यस्तै सोही जिल्लाको काँडा गाउँपालिकामा पनि एमालेकै गोपाल बोहराको प्यानल विजयी भएको छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जिल्ला डडेल्धुराको अमरगढी न.पा. १ मा लोकबहादुर ऐरको प्यानल विजयी भएको निर्वाचन आयोग डडेल्धुराले जानकारी गराएको छ । ७१७ मत प्राप्त गरी विजयी ऐरको निकतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका शेरबहादुर दियालले ६२१ मत प्राप्त गर्नुभयो । सुदूरपश्चिमको एक मात्र उपमहानगरपालिका धनगढी उपमहानगरपालिकामा नेपाली काँग्रेस र स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमालबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ ।
यो समाचार तयार पार्दासम्म नौ सय मत गणना गर्दा नेपाली काँग्रेसका नृप ओडले ३३४ मत प्राप्त गर्दा उहाँको प्रतिद्वन्द्वी गोपाल हमालले २८९ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । त्यस्तै, एमालेका दुर्गाप्रसाद जोशीले ६९ मत र माओवादीका रामसमझ रानाथारूले ६२ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । सोहीअनुसार उपप्रमुखमा काँग्रेसका सुशीला मिश्र भट्ट ३६५ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । उहाँको प्रतिद्वन्द्वी एमालेका रुक्मणी देवकोटाले १५४ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । त्यस्तै माओवादीका शान्ति अधिकारी क्षेत्रीले १३९ मत प्राप्त गर्नुभएको निर्वाचन आयोग धनगढीले जानकारी गराएको छ । त्यस्तै, टीकापुर नगरपालिकामा तीनहजार २४ मत गणना हुँदा नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका उम्मेदवार लौटन चौधरीले १०३० मतका साथ फराकिलो अग्रता कायम गर्नुभएको छ । उहाँलाई एमालेका तपेन्द्र रावलले ५२४ मत प्राप्त गरी पछ्याउनुभएको छ । त्यस्तै काँग्रेसका जङ्गबहादुर साउदले ५२२ मत प्राप्त गर्नुभएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय टीकापुरले जानकारी गराएको छ । सोहीअनुसार कञ्चनपुरको ९ वटा स्थानीय तहमध्ये चार वटामा एमालेले अग्रता लिएको छ ।
पुनर्वास नगरपालिका प्रमुखमा एमालेले ५४४ मतले अगाडि छ । त्यस्तै, उपप्रमुखमा ५२८ मत प्राप्त गरेको निर्वाचन आयोग कञ्चनपुरले बताएको छ । त्यस्तै, वेदकोट नपामा पनि एमालेको अग्रता छ । कृष्णपुर र बेल्डाँडी नपामा पनि एमालेकै उम्मेदवारले अग्रता लिएका छन् । कैलालीको छ नगरपालिकामध्ये अत्तरिया, गोदावरी, लम्की नपामा काँग्रेस, बर्दगोरिया र घोडाघोडी नपामा माओवादीले अग्रता लिएको निर्वाचन आयोग धनगढीले बताएको छ । त्यस्तै, डोटीको चार तहमा काँग्रेसले अग्रता लिएको छ । दिपायल सिलगढी नपा, शिखर नपा, केआईसिंह गाउँपालिका र सायल गाउँपालिकामा काँग्रेसका उम्मेदवारले अग्रता लिएका छन् । एमालेका उम्मेदवारले पछ्याइरहेका छन् । सुदूरपश्चिमको अधिकांश ठाउँमा काँग्रेस र एमालेबीच नै प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीमा भने एमाले निकै पछाडि छ । त्यसको ठाउँका काँग्रेस र स्वतन्त्र उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । कैलालीको १३ वट स्थानीय मध्ये पहाडी क्षेत्रमा पर्ने मोहन्याल गाउँपालिकाको मात्र मतगणना हुन बाँकी छ । बाँकी १२ वटा स्थानीय तहको मतगणना सुरु भइसकेको क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख मोहन अर्यालले बताउनुभयो । टाढा टाढाबाट मत पेटिका ढुवानी गर्न गाह्रो भएकाले अहिलेसम्म त्यहाँको मतगणना सुरु हुन नसकेको अर्यालले बताउनुभयो । यद्यपि बिहीबार साँझ ८ बजेबाट सर्वदलीय बैठक बसेकाले सम्भवतः शुक्रबार बिहानबाट मतगणना सुरु हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।